Nzira Shanu Dzekunamata MuMweya Hondo | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Munyengetero Nzira Shanu Dzokunamata Mune Hondo Yemweya
Nhasi tichange tichidzidzisa nzira shanu dzekunamatira hondo yezvokunamata. Hupenyu inzvimbo yehondo. Tiri varwi. Hatifanire kuratidza kuregeredza. Rugwaro runotiraira mubhuku ra VaEfeso 6: 11-12-13 Shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari kuti mugone kumira muchirwa namano aDhiabhori kana tisingaiti mutsimba nenyama neropa, asi namasimba, namasimba, navabati venyika. rima renguva ino, pamusoro pemweya yezvakaipa munzvimbo dzekudenga. Naizvozvo torai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, kuti mugone kumira nezuva rakaipa, maita zvose, mumire.
Ichi chikamu cherugwaro chakatsanangura mhando yedu yeHondo. Hondo yedu haisi yepanyama nekuti hatirwisane nenyama neropa asi vatongi, masimba, nemasimba munzvimbo dzakakwirira. Tichitarisa nerudzi urwu rwekurwa, hatifanire kuratidza chero hutera hwesimba. Tinofanira kunge takagadzirira nguva dzose. Zvakanaka kuziva, Mwari akativimbisa kukunda pamusoro pesimba rega uye rima kuburikidza nesimba muzita raJesu. Nekudaro, izvi hazvireve kuti hapana kurwa. Tinofanira kuramba tichirwa hondo yezvokunamata.
Kuziva manamatiro muhondo yemweya kunoenda kure kure mukuona kuti kukunda kunowanikwa. Hondo yemweya haina kufanana nemunamato wenguva dzose. Iyi ndiyo minamato yerusununguko, yekutonga, yekudzoreredza. Ivo havazi mhando yemunamato wakanamatirwa zvakanyanya. Sezvo minamato iyi yakakosha, kusaziva nzira dzakanakisa dzekunamatira kunoita kuti isashande. Kana uchinamata, unofanira kuzviita nekunzwisisa uine kuziva.
1. Namata Mumweya
Kunamata mumweya hakusi kungotaura nendimi panguva yekunamata. Kunyangwe kutaura mumweya unoera iri imwe nzira yakajairika yekunamata mumweya, zvisinei, kune zvimwe kune izvo. Kunamata mumweya kunouya nekuziva uye nekunzwisisa izwi.
Paunodzidza izwi, pane dudziro kuburikidza nesimba remweya mutsvene. Kana dudziro ikauya, iwe wabatidzwa mumweya wako kuti unamate uchishandisa izwi. Shoko raMwari munondo. Bhuku raVaHeberu 4:12 Nekuti izwi raMwari ibenyu uye rine simba, uye rinopinza kukunda chero munondo unocheka nekwose, rinobaya kusvikira panoparadzana mweya nemweya, nemafundo nemwongo, uye rinoziva mifungo nezvinangwa. yemwoyo.
Kunamata muhondo yemweya hakumbopedzerwi pasina kunamata mumweya. Kunamata mumweya hakushandi kusvikira shoko ratumirwa. Paunenge uchinamata mumweya, zvakakoshawo kuti unamate mumweya mutsvene. Idzi ndimi dzisingazivikanwe dziri pachena kuna Mwari. Kana iwe uchitaura mumweya unoera, unova mutungamiriri wedunhu munzvimbo yemweya. Unoita kutaura nemazwi ari pamusoro pekunzwisisa kwevanhu.
2. Namata Usingaregi
Iwe haufanire kutanga mumunamato chete kana iwe uri mudambudziko. Dzidza kunamata kunyangwe zvinhu pazvinoratidzika kunge zvakajairika. Mumazuva enhamo, iwe hauna kuwana simba rakaringana rekudzorera. Semuenzaniso, hauna simba rose rekunamata zvine simba kana chirwere chakaipa chakubata. Saka newewo ucharasikirwa nekubata kwese kwesimba rekunamata kana uchinge uchinetseka. Nyasha dzenyu dzinoponesa panguva ino dzinozove makore enguva yekunamata ine zvibereko yawakashanda.
Iwe unofanirwa kuziva kuti murwi haasi mukwikwidzi nekuda kwezvakaitika munhare yekurwa. Iye shasha kuburikidza nemaawa ekugadzirira. Anozongopinda mhete kuratidza zvese zvakaitwa. Ndozvazvakaitawo nehondo yemweya. Iwe hauve mukundi kana dambudziko rikauya; unova mukundi kuburikidza nemakore kana mazuva ekugadzirira awakaita. Ndo izvo zvinokuchengetedza iwe kuenda munguva dzekutambudzika.
3. Kurumidza uye Namata
Mathew 17:21 Zvisinei, rudzi urwu harubudi kunze kwekunamata nekutsanya. ”
Hapana chinofamba choga kunze kwekunge paine simba rekunze. Haufanire kuregeredza nzvimbo yechibairo kana uchirwa hondo yemweya. Mudzivisi haazorori masikati nousiku; sei uchifanira kunonoka semutendi? Iwe unofanirwa kusimbisa hupenyu hwako hwekunamata nekutsanya.
Uku ndiko kupindurwa kwaKristu apo vaapositori pavakabvunza kuti sei vaisakwanisa kuita mamwe manenji saJesu. Chishamiso hachiitike kunze kwekunge paine kutsanya nekunamata. Kunyangwe Kristu wekumusoro ari kutsanya kwemazuva makumi mana nehusiku asati atanga basa rake pano pairi. Iwe unofanirwa kudzidza kutsanya semuKristu. Kumwe kukunda hakuuye kunze kwekunge iwe watsanya.
Nepo munamato riri simba rinotyaira mhinduro, kutsanya isimba rinoita kuti simba rimanikidze.
4. Namata Nokutenda
Vahebheru 11: 6 asi pasina rutendo hazvibviri kumufadza, nekuti unouya kuna Mwari, unofanira kutenda kuti iye uripo, uye mupi wemubairo wevanomutsvaka nemoyo wose.
Iwe urikunamata kuna Mwari, asi hauna rutendo maari. Kuti iwe ugamuchire kubva kuna Baba, unofanirwa kutenda mukuwanda kwesimba ravo. Unofanira kutenda izvo zviripo, uye Iye ane simba rakaringana kushandura mamiriro akadaro.
Kutenda kwako kunofanira kuva kwakasimba; unofanira kuva nechivimbo mumoyo mako kuti Mwari anogona kukupa kukunda. Isu tiri varume vane zvisingaite kuona. Kuona kwedu kuri mukutenda kwedu kuti baba vedu vekudenga vane simba uye Vakakunda nyika. Iwe unofanira kutanga wakiya mukutenda uku, uye ipapo kukunda kunouya.
5. Namata Neropa raKristu
Zvakazarurwa 12: 11 Uye ivo vakamukunda neropa reGwayana uye neshoko reuchapupu hwavo, uye havana kuda hupenyu hwavo kusvika parufu.
Ropa raKristu rinosimudzira isu vatendi. Kuti kuregererwa kuuye, kunofanirwa kuve nekudeurwa kweropa. Kuti akunde zvivi, Kristu aifanira kudeura ropa rake. Saizvozvo, kuhondo yemweya, ropa richiri rakaringana kuti rione kukunda.
Chinyorwa chinodaro, uye vakamukunda neropa regwayana. Paunonamata hondo yemweya, gara uchisimbisa ropa. Ropa raKristu rakadeurwa, uye rinoramba richiyerera muCalvari. Izvi zvinotitaurira kuti simba reropa rinogara nekusingaperi.
Previous nyayaKunamata Points Yekukomborerwa Kwamazuva Ose
inoteveraAnesimba Anonamata Points Yeakanaka Husiku Kurara
34 Matipi Emunamato Ekubudirira MuUshumiri